पवित्र आदेश – 2माछा
घर / चर्च / यो Sacraments / पवित्र आदेश
पवित्र आदेश मानिसहरू अनुमोदित छन् जसमा एक sacrament छ वा “नियुक्त” मण्डली द्वारा अन्य छवटा गर्न sacraments. मानिसहरू deacons हुन सक्छ, पूजाहारीहरू वा Bishops.
तर, पवित्र आदेश को sacrament मात्र Bishops द्वारा गरिन्छ, र बाइबल सिधै निम्नानुसार.
त्यहाँ धर्मशास्त्र मा एक स्थापित तरिका सेवकाईलाई परमेश्वरको कल दिइएको र प्राप्त छ, जो छ. यो परमेश्वरको येशूलाई बग्छ, येशूले प्रेरितहरूलाई देखि, र प्रेरितहरूको देखि आफ्नो उत्तराधिकारियों गर्न (देख्न लूका को सुसमाचार 10:16 र यूहन्नाको सुसमाचार 13:20; 20:21). त्यसैले, पवित्र आदेश को sacrament गर्न सकिन्छ मात्र एक प्रेरित वा मात्र प्रेषितहरूको जस्तै अख्तियार conferred गरिएको छ जसलाई एउटा द्वारा. जस्तै, पावलले लेख्छन् आफ्नो तिमोथीलाई पहिलो पत्र (4:14), “तपाईं वरदान बेवास्ता नगर्नुहोस्, एल्डरहरूको परिषद तिमीहरूमा आफ्नो हात राखे गर्दा जो भविष्यसूचक कथन द्वारा दिएको थियो” (देख्न 5:22, आफ्नो तिमोथीलाई दोस्रो पत्र, 1:6, र आफ्नो तीतसलाई पत्र 1:5). त्यसैले, को sacrament आजको नवीनतम क्याथोलिक पुजारी येशूको एक unbroken श्रृंखला निम्नानुसार. (तल यो थप।)
प्रारम्भिक चर्च मा, Bishops शामिल भनेर वर्गीकरणका विकास, presbyters (वा प्राचीन), र deacons, जो पूजाहारीले को इस्राएलका तीन-सोपानकृत संरचना गर्न पत्राचार, पूजाहारीहरूले, र लेवीहरूले (पावलको हेर्न को Phillipians गर्न पत्र, 1:1; सेन्ट जेम्स’ Epistle, 5:14; गन्ती पुस्तकका, 32; इतिहास को दोस्रो पुस्तक 31:9-10).1 इस्राएलमा, पुजारी परमेश्वरको अद्वितीय emissary रूपमा देखेको थियो (देख्न मलाकी 2:7), एक anointing र हात को अँगाल्न द्वारा सम्मेलन अलग्गै भइरहेको (देख्न प्रस्थान 30:30 वा व्यवस्था 34:9).
प्रेरितहरूको यहूदीहरू थिए दिइएको, मण्डली ordination को उनको अनुष्ठान लागि यी यहूदी भन्सार अपनाए.
छैन हामी सबै पुजारी?
कुनै, तर कहिलेकाहीं मानिसहरूले सबै विश्वासीहरू ख्रीष्टको पुजारीको मा साझेदारी गर्न भनिन्छ कि बाइबल सन्देश द्वारा भ्रमित छन्. जस्तै, सेन्ट पत्रुसको पहिलो पत्र (2:9) राज्यहरु, “तपाईं चुनिएको जाति, शाही पुजारीको, एक पवित्र जाति, परमेश्वरको आफ्नै मान्छे।” यी शब्दहरू फिर्ता एउटा सन्दर्भ हो प्रस्थान 19:6, “तपाईं मलाई पूजाहारीहरूको एक राज्य, र एक पवित्र जाति हुनेछ।”
व्यक्तिहरूको एक विशेष समूह sacraments प्रदर्शन अख्तियार आरक्षण गर्न (पूजाहारीहरूले) भनिन्छ sacerdotalism.
पुरानो करारका, सानो, sacerdotal पुजारीको इस्राएलका ठूलो पूजाहारीको राष्ट्र भित्र अस्तित्व. हामी व्याख्या रूपमा, यसलाई नयाँ करारका नै छ.
बाइबलले sacerdotal पुजारीको आध्यात्मिक पिता एक प्रकारको हुन प्रकट, क्याथोलिक चर्चका पूजाहारीको ordination एक्लै मानिसहरू लागि सुरक्षित छ भनेर किन सिकाउँछ जो. जस्तै, पुरानो नियममा, यो न्यायकर्ता को बुक (18:19) राज्यहरु: “हाम्रो साथ आउन, र हामीलाई बुबा र एक पुजारी हुन।”
त्यसै गरी, नयाँ नियममा, पावलले लेख्छन् आफ्नो कोरिन्थीहरूलाई पहिलो पत्र (4:15) कि “तपाईं ख्रीष्टमा असंख्य गाइड छ हुनत लागि, तपाईं धेरै बुबाहरू छैन. म सुसमाचारको मार्फत ख्रीष्ट येशूको मा आफ्नो बुबा भए।” पावलले त्यही अध्याय सुरु यो आध्यात्मिक पिता वा sacerdotal पुजारीको थप elaborates, जब उहाँ भन्नुहुन्छ, “यो एक हामीलाई सन्दर्भमा कति छ, ख्रीष्टको सेवक र परमेश्वरको रहस्य को भण्डारेहरूको रूपमा” (4:1).2
उहाँको सेवाको सुरुमा, येशूले भीडलाई जस्तै कि remarked “गोठालो बिना भेडा,” यसो, “बाली धेरै छ, तर श्रमिक केहि; आफ्नो बाली मा श्रमिक बाहिर पठाउन कटनीको यसैले प्रभु प्रार्थना” (देख्न मत्ती 9:36, 37-38). यी कैफियत बाह्र प्रेरितहरूको उहाँको चयन भूमिकामा, जसलाई उहाँले शक्ति र विश्वासी आफ्ना प्रत्यधिकृत गोठाला पठाइएका (देख्नुभएको यूहन्नाको सुसमाचार 21:15-17; यो प्रेषितहरूको प्रेरित 20:28; र पत्रुसको पहिलो पत्र 5:2). “तपाईं मलाई रोजे,” उहाँले तिनीहरूलाई पछि सम्झना, “तर म तपाईं रोजे र तपाईं जानुहोस् र फल फलाउन गर्नुपर्छ भनेर नियुक्त” (यूहन्ना 15:16). “मानिसहरू तिनीहरू पठाइएका छन् नभएसम्म कसरी प्रचार गर्न सक्छौं?” पावलले लेख्छन् आफ्नो रोमीहरूलाई पत्र, 10:15.
कतै धर्मशास्त्र मा एक मानिस आफूलाई लागि सेवकाईमा मान गर्छ. “आफैलाई मा सम्मान लिन गर्दैन, तर परमेश्वरले भनिन्छ, हारून थियो जस्तै,” पावलले लेख्न आफ्नो हिब्रूहरूलाई पत्र 5:4 (आफ्नो हेर्न कलस्सीका पत्र 1:25, पनि). जब केही यहूदी exorcists दुष्टात्मा हप्काउनुभयो गर्न प्रयास “पावलले प्रचार जसलाई येशूले,” आत्मा जवाफ, “येशूले मलाई थाहा, र पावलले मलाई थाहा; तर तपाईं को हो?” (प्रेषितहरूको प्रेरित, 19:13, 15).
त्यसैले, सेवकाईमा गर्न मान्य कल सामान्यतया प्रेषितहरूको जस्तै तहगत प्रणाली को पुष्टि समावेश. जस्तै, मा प्रेरितहरूको ऐन (1:15), माथियसइट्रिच खडा गर्दैन र आफ्नो volition आफ्नो सेवकाई कार्यालय लिन. उहाँले पत्रुस र प्रेषित अख्तियार अनुसार निर्वाचित छ, पवित्र आत्माको डोऱ्याइमा. न त पावलले गर्छ, आफ्नो नाटकीय रूपान्तरण बाबजुद, सुसमाचार प्रचार गर्न आफ्नो मा बन्द सेट, आफूलाई परमेश्वरको anointing दाबी. मा उल्लेख गरिएको रूपमा आफ्नो गलातीहरूलाई पत्र (1:18), उहाँले प्रेरितहरूको स्वीकृति प्राप्त गर्न यरूशलेम पहिलो जान्छ, र पछि उहाँले प्रचार छ सुसमाचार सही छ प्रमाणित गर्न फिर्ता (2:2).
जबकि सबै मसीहीहरूलाई evangelize बोलाइएको हो, प्रेरितहरूको र आफ्नो उत्तराधिकारियों विश्वास को जम्मा सुरक्षित राख्न र विश्वासी सिकाउने अनुपम कल छ. मा मत्ती को सुसमाचार (28:19-20) येशूले प्रेरितहरूलाई भन्नुहुन्छ, “यसकारण गएर सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाउन, पिताको नाम र पुत्रको र पवित्र आत्माको तिनीहरूलाई बप्तिस्मा, म आज्ञा गरेको सबै पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाउने।”
त्यसै गरी, आफ्नो तिमोथीलाई दोस्रो पत्र, पावलले निर्देशन: “हामीलाई भित्र बास गर्ने पवित्र आत्मा द्वारा तपाईं सुम्पिएको गरिएको सत्य रक्षा,… वफादार पुरुष अरूलाई पनि सिकाउन सक्षम हुनेछ जसले के तपाईं धेरै साक्षी अघि मलाई सुनेको सुम्पिन्छु।” (पद 1:14; 2:2; 1:13; र प्रेषितहरूको प्रेरित 2:42).
वास्तवमा, जब उहाँको सेवक सिकाउन यो उहाँले भन्नुभयो रूपमा तिनीहरूलाई मार्फत सिकाउँछ जो ख्रीष्ट आफैले छ: “जसले सुन्नुहुन्छ तिमी मलाई सुन्नुहुन्छ, र उहाँले जसले तपाईंलाई अस्वीकार, मलाई अस्वीकार, र उहाँले गर्ने अस्वीकार मलाई मलाई पठाउनुहुने उहाँलाई अस्वीकार” (लूका 10:16). अन्य ठाउँमा उहाँले यस्तो घोषणा, “साँच्चै, साँच्चै, म तपाईंलाई भन्न, उहाँले कुनै एक जो प्राप्त जसलाई म पठाउन मलाई प्राप्त; र उहाँले गर्ने प्राप्त मलाई मलाई पठाउनुहुने उहाँलाई प्राप्त” (यूहन्ना 13:20; जोड थपियो).
प्रेषित गर्ने Eucharistic उत्सव भन्दा अध्यक्ष अख्तियार दिइएको. जस्तै, जबकि पछिल्लो रातीको अन्तिम खाना मा Eucharist स्थापना, उहाँले तिनीहरूलाई बोलपत्र, “मेरो सम्झनामा यो गर” (लूका 22:19 कोरिन्थीहरूलाई र पावलको पहिलो पत्र, 11:23-24). प्रेषित उहाँको पुजारीको विश्वासी तर्फबाट Eucharistic बलिदान भेटी को मुख्य कर्तव्य र यो संग एक अद्वितीय शेयर प्राप्त (CF. छ. 5:1).3
प्रेषित पनि पत्रुस दिइएको कुञ्जीहरू वरदान र अख्तियार मार्फत पाप क्षमा गर्ने शक्ति येशूको प्राप्त” बाँध र छाडा” एक समूहको रूपमा तिनीहरूलाई conferred (CF. मत्ती. 16:19; 18:18). “बुबाले मलाई पठाउनुभएको छ रूपमा,” को मुक्तिदाता तिनीहरूलाई यसो भन्छन्, “तथापि म तपाईलाई पठाउँछु. … पवित्र आत्मा प्राप्त. तपाईं कुनै पनि पापको क्षमा भने, तिनीहरूले क्षमा; तपाईं कुनै पनि पापको राख्ने यदि, तिनीहरूले खुलिरहेको छन्” (यूहन्ना 20:21-23; जोड थपियो).
तापनि यसको सबै prerogatives संग प्रेषितहरूको जस्तै कार्यालय पूर्णतामा तल पारित भएको थिएन, को Bishops, प्रेरितहरूको गर्न प्रत्यक्ष उत्तराधिकारियों रूपमा, तहगत प्रणाली को टाउको मा रहेका. ↩
शब्द “रहस्य,” मा ग्रीक, mysterion, रूपमा ल्याटिन मा अनुवाद गरिएको छ रहस्य वा “sacrament।” ग्रीक अर्थोडक्स पवित्र रूपमा Sacraments संकेत गर्न यो दिन जारी “रहस्य।” ↩
एक बलिदान रूपमा Eucharist को बाइबलीय दृश्य (CF. समय. 1:11; 1 कोरि. 10:1-5, 15-22; 11:23-30; छ. 10:25-26), वास्तबमा, एक sacerdotal पुजारीको अस्तित्व गर्न थप अंक–यो प्रस्ताव बलिदान को उपस्थिति एक पुजारीको necessitates लागि. पोपको सेन्ट Clement, बारेमा वर्षमा रोम लेखनमा 96, स्पष्ट सेवकाई पुजारीको द्वारा प्रस्तावित Eucharistic बलिदान र आध्यात्मिक बलिदान गर्ने laity को पुजारीको द्वारा प्रस्तावित बीच प्रतिष्ठित (CF. कोरिन्थीहरूलाई Clement पत्र 40-41). को Eucharistic बलिदान गलतफहमी, गैर-क्याथोलिक कहिलेकाहीं को क्याथोलिक आरोप “पुन त्यागी” येशूले मास मा. यो Eucharistic बलिदान एक पुन त्यागी छैन, तर, तर कलवारी को एक बलिदान को एक पुन प्रस्तुति. ख्रीष्टको फेरि मर्दैन; जीउ र रक्त बचत आफ्नो रोटी को स्वरूप र वाइन अन्तर्गत वेदीमा वर्तमान गरे ताकि विश्वासी May “उहाँ नआउञ्जेल प्रभुको मृत्युको घोषणा” पावलले लेखे रूपमा आफ्नो कोरिन्थीहरूलाई पहिलो पत्र (11:26). ↩